Ukuhlaziywa Kwesiphetho | Izindaba zamagajethi
UMundi Videogames | | Imidlalo yevidiyo
Ngaphandle kobudlelwano obusondele futhi obunezithelo ayenabo naye Microsoft esikhathini esedlule, Bungie uthathe isinqumo sokuyeka isandla aqale ukuhamba yedwa, azi ukuthi umsebenzi wakhe omuhle nge-saga Halo Kwakuyincwadi yokuncoma eyayizokwanela ukuthola ngokushesha umngane omusha wokuhamba. Futhi lapho yaqala ukudlala Activision, ongasitholanga isikhathi sokusayina isivumelwano naye Bungie ukuze wakhe isaga okufanele ihlale kuze kube yiminyaka eyishumi.
Lapho kumenyezelwa i- Destiny, abaningi kwakungabantu ababenethemba lokuthi lo uzoba ngumlandeli ongokomoya ka Halo I-RPG-tinged, endaweni enkulu egcwele i-adventure namathuba. Kudingeke ukuthi silinde kuze kube semvuthwandaba wokuthuthuka kancane kwalesi sitolimende sokuqala, ekugcineni, okusezandleni zethu, yize manje umbuzo usihlasela: Ingabe bekukufanele ukulinda? Sikutshela ngakho ekuhlaziyweni kwethu.
Ngemuva kokuzama, imizwa yokuthi Destiny okungishiyile akuzange kwanelise ngokugcwele. Akungabazeki ukuthi ukubheja kwe- Activision Kube yingozi, yize kunomsebenzi wesitudiyo esidumile ngemuva kwemigqa yekhodi yomdlalo. Umoya wobukhulu umshicileli asonge ngawo i-Destiny kanye nokutshalwa kwemali ekukhangiseni, akuhlanganisi, ngaphandle kokungabaza, ukushiyeka komdlalo. Futhi uma ukhuluma ngezinombolo, ukuze uthole umbono wesikali sephrojekthi, Activision okumiselwe Ama-dollar ayi-500 okufanayo -I-GTA V ube nesabelomali sama-dollar ayizigidi ezingama-265 - kepha qaphela, ngokusho UPete parsons, of Bungie, intuthuko uqobo lwayo Destiny ngangingenayo imali enjalo, futhi ngidonsa leyo nkontileka eyayicatshangwe ukuthi ingaputshuka, kungaba yizigidi eziyi-140 abadali bayo Halo ukuthuthukisa lolu hlelo, kanti ama-360 asele ngabe ayilele imishini yokuthengisa. Kumele kuqashelwe ukuthi ukwethulwa komdlalo kube yimpumelelo nokuthi, ngamahora angama-24 nje kuphela, Activision ufake ephaketheni i- $ 500 million kusuka ekuthengisweni okuqondile kwe Destiny.
Imodi yomkhankaso ayinaso isakhiwo esiyinkimbinkimbi ngempela noma esimunca okuncane: ayisiyona nje indaba yezindaba eziqanjiwe zesayensi enohambo oluphakathi kwamaplanethi kanye namaqhawe namahlongandlebe alwela amabhanela awo. Futhi uma ngikhuluma ngobude besikhathi, abanye benu bangaphonsa izandla zenu ekhanda futhi bakubize kungenzeki, kepha kumdlalo orekhodiwe ngikwazile ukuqinisekisa ukuthi ngamahora angaphezudlwana kuka-6 ngikwazile ukuqeda umsindo Indaba enokuzonda. Vele, manje kulapho abaningi bezongitshela ukuthi empeleni ibhlokhi ephakathi kohlelo futhi leyo enganikeza ngamahora amaningi wegeyimu yimodi yabadlali abaningi, futhi ngeke baswele isizathu, kepha kusenama-buts abalulekile.
Okukhathaza kakhulu, ngaphandle kokungabaza, ukungabi nokuqukethwe. Kuzoba nezindlela ezahlukahlukene zokuphindaphinda izindawo zomdlalo, kepha sizikhawulela emisebenzini ephindaphindwayo - ukusuka kwelinye iphuzu ukuya kwelinye ukubulala izitha - nokuphindaphinda izimo ezifanayo kaninginingi, futhi lokhu, kuhlelo olunokuzenzisa okukhulu futhi lokho kuhlose ukuhlanganisa izinhlobo ezimbili kokukodwa, i-FPS neMMO, idlala ngokumelene nawe ngokuphelele. Qaphela, lapho sinefayela le- Borderlands, ngendlela edlalwayo ehamba emigqeni efanayo, kepha gearbox uzikhathaze ngokwanele ukulanda nokuqukethwe ezinhlelweni zabo, ikakhulukazi isitolimende sesibili - yize iningi, futhi ukuxilongwa okunembile, lizizwa likhungathekile nge-dlc eningi futhi kufanele likhulule ikhadi lesikweletu njalo ngambili kuya kwamathathu ukukhama kakhulu umdlalo Kakade sebekhokhe amashumi ama-euro ngosuku lokwethulwa.
Sinezindawo ezine: uMhlaba, iNyanga, iVenus neMars, enemishini yomkhankaso eyi-19 kanye nemishini emihlanu yokuhlasela - ifinyeleleka kuphela ngokubambisana-. Siphinde sibe nokugasela kokuhlola nezindlela ezine zabadlali abaningi zokuncintisana. Siphinde sibe nemisebenzi yesibili, njengezinkontileka, ukushelela ukuthola izikhali ezintsha, noma sizama ukunqoba i-adventure sisebenzisa abalingiswa abathathu abehlukene emidlalweni emithathu ehlukene -nome umehluko wabo ucishe ube yi-anecdotal futhi kufanele sinakekele ukukhuphula izinga, ngoba kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthatha phansi ezinye izitha. Kungazwakala njengokuningi okumele ukwenze, kepha ungacabangi ukuthi kuzoba yinto entsha futhi angikwazi ukucabanga ubuso babaningi lapho befika ezindaweni nezigaba ezivaliwe ngezindonga ezingabonakali, okungenzeka ukuthi, zizophela ukuba yindawo yezintombi lapho sikhokha intengo ye-DLC yethuba ezosebenza njengephasiphothi ukungena nokuhlola ngendlela esithanda ngayo.
Njengoba ngishilo, ngiphindaphindeka kakhulu, ngilinganiselwe futhi ngingenazo izisusa zangempela zokunikela ngezikhathi zomdlalo omude: ucabanga ngempela ukuthi ngizochitha isikhathi ngiphinda ukuthunywa noma ngiqoqe amakhambi ukuze ngikwazi ukuthenga ukuthuthukiswa kwesikhali noma i-Cape emuva ukudlula indawo efanayo esengivele ngiyihlolile izikhathi ezimbalwa? Kumele futhi sisho eminye imininingwane, njenge-AI engathandeki kakhulu nezimo lapho sihlangana nabaphathi bokugcina abanzima abanemigoqo yokuphila yokwelulwa okungathandeki, okukucindezela isidingo sokuthi ube nozakwenu noma abaningana ukunqoba leso sikhubekiso - yize ngezinga lobuhlakani bokufakelwa ebengikhuluma ngalo, akudingekile ukuthi ube ngusomaqhinga weqiniso ukunqoba lezi zitha. Futhi maqondana nezinhlanga, zimbalwa futhi azifani, zigijimela kumagagasi ezitha ze-clone, lapho omunye onzima kunomunye amelwe umbala ogqame kakhulu futhi singabona nokuthi amanye amamodeli asekhulile abe nomphathi emsebenzini ngaphandle okuningi.
Ezingeni lokulawula, njengoba bekulindelekile hhayi ngenye indlela, Destiny umsulwa Halo. Ngokuqondene nohlelo lwe-RPG, sinesihlahla samakhono esikhawulelwe kubuncane obungenalutho ngokwezifiso. Kuyiqiniso ukuthi umlingiswa ngamunye unamakhono akhe, kepha awenzi mehluko omkhulu okhomba ukuthi sisebenzisa eyodwa noma enye, ngoba ngesikhathi seqiniso, singazisebenzisa ngokungaqondakali. Ngokobuciko, imiklamo yesikhathi esizayo ayinasici, nakancane, kepha ikakhulukazi ingxenye ejwayelekile, okungaphezu kwalokho, kwesinye isikhathi sizoba nemibono ethile ezosilethela izinkumbulo zokuzijabulisa kukaCommander Shepard, yize kungenjalo neze ama-epics - esinye nje isithako esingekho Destiny: izindinyana ezidumile-. Ezingeni lokuqhafaza, isiteji sijwayelekile, ngokunye ukwakheka nemininingwane ebonakala ingafanelekile kulokho obekungaba ngomunye wabaphathi abajwayelekile besizukulwane esisha semidlalo yevidiyo, yize sibheka isimo esikhulu, singaba unomusa nokuphakamisa isandla. Ku-soundtrack ungabona umsebenzi omuhle we UMartin O'Donnell, obonakala engaphindi aye ngomsindo ngemuva kokuhamba kwakhe kusuka Bungie, futhi maqondana nokudubheka, amazwi akhathele okuhlala njalo. Ngiqeda ngemininingwane eyengeziwe yokuthi sizocelwa ukuthi sihlale siku-inthanethi nokuthi ukusika ekuxhumaneni kuzokonakalisa umzamo otshaliwe ngemuva kokulondolozwa kokugcina.
Destiny iyi-hybrid eyingqayizivele phakathi Halo y Borderlands, Ezama ukuletha kokuhlangenwe nakho okukodwa ezinye zezici ezihluke kakhulu zalawa ma-franchise. Noma kunjalo, Bungie yehlulekile ukudala umdlalo obabazekayo, ingasaphathwa eyokuqhekeka komhlaba futhi okuhambisana nokuvumelana ezigabeni eziningi. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokuziluma ngolimi, anginakulokotha ngithi ukuxokozela okuzungeze lo mdlalo kulezi zinsuku kube yimpendulo enkulu ekukhangiseni kunakuhlelo uqobo.
Umkhankaso mfushane futhi okuqukethwe kulo mdlalo ngokushesha kuyasilela futhi kuphindaphindiwe, uze wazi ukuthi isipiliyoni sangempela siza ngemodi eku-inthanethi, futhi kuleli qophelo, khumbula ukuthi udinga ukubhaliswa okusebenzayo kwe- Xbox Live Gold -uma kwenzeka kuba Xbox One y Xbox 360- noma PlayStation Plus-ngoba PlayStation 4e PS3 Akudingekile-. Impela, manje isiphakamiso se DestinyMhlawumbe, ngokuzayo, ngezinhlelo zokuqukethwe ezingalandwa etafuleni -okuzosho ukopha kakhulu ephaketheni lomsebenzisi-, kungahle kuthakazelise ukuhlola umthala ndawonye nabalingani bakho.
ISAZISO SOKUGCINA MUNDIVJ 6
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Ukuhlaziywa kwesiphetho
IPorteus: Umhlahlandlela ophelele wokuba ne-Linux OS kwi-PC yakho
Nikeza isithombe koxhumana nabo ngaphandle kwezithombe ku-Android nge-Identiconizer!